ကိုဗစ်ရောဂါလူနာတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ အောက်စီဂျင်ရဖို့ စက်ရုံတွေရဲ့အပြင်ဘက်မှာ တန်းစီစောင့်ဆိုင်းနေတဲ့ ပြည်သူများ။ (ဇူလိုင် ၁၁၊ ၂၁)
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကိုဗစ်-19 ဖြစ်ကြတဲ့ လူနာတွေမှာ ဆေးရုံတွေက လက်မခံနိုင်လောက်အောင် များလာနေချိန်မှာ၊ ကိုယ့်အိမ်မှာပဲ စောင့်စားကုသကြရာ သေဆုံးမူတွေလည်း အတော်များလာနေပါတယ်။ သေဆုံးမူတွေ လျှော့ချနိုင်ရေးအတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပ ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေက ဖုန်းကတဆင့် ကူညီကုသပေးနေရာမှာ အဓိကတော့ လူနာတွေက ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဆေးမီးတိုနဲ့ ကြိတ်မကုဘဲ၊ ဆရာဝန်တွေနဲ့ မေးမြန်း စစ်ဆေး အကြံယူကုသဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီရောဂါဖြစ်လာတာကို မရှက်မကြောက်ဘဲ လက်ခံပြီး၊ ဆရာဝန်တွေကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့ လိုပါတယ်။ တချို့ တွေက သာမန် အပူရှပ်၊ တုပ်ကွေး၊ အအေးမိတာလို့ စိတ်ဖြေကာကွယ်ပြောဆိုနေကြသလို၊ တချို့ တွေကလဲ သေမှာပဲလို့ စိုးရိမ်လွန်ကဲနေတာတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေနဲ့ ကြိုတင်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြင့် အခြေအနေ မဆိုးလာခင်မှာ၊ စောစောသိ စောစောကုသနိုင်ပါတယ်။ နောက်ကျမှသိပြီး အောက်ဆီဂျင် အလွန်အမင်းကျနေချိန်မှ သိရလျှင်တော့၊ ပြန်ကောင်းအောင်ကုစားဖို့ ခက်ခဲလွန်းလှပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံထဲက ဆရာဝန်တွေကို ဆက်သွယ်ရခက်နေလျှင်လဲ၊ နိုင်ငံခြားက မြန်မာဆရာဝန်တွေကို လူမူမီဒီယာကွန်ရက် (Social Media – Facebook Messenger) က တဆင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
အမေရိကန်နဲ့ ဗြိတိန်က ကိုဗစ်ကုသရေးညွှန်ကြားချက် (Guideline) အပေါ်အခြေခံပြီး၊ အရင် အမေရိကန်က လူအိုရုံတွေနဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့ လူနာတွေကို၊ အမေရိကန်ရောက် မြန်မာဆရာဝန်တွေ တယ်လီဖုန်းကတဆင့် အများကြီး အသက်ကယ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလဲ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သေဆုံးမူများလာနေတာအတွက်၊ ဒီနည်းနဲ့ပဲ ဆက်ကယ်တင်ပေးနိုင်တာတွေရှိလာနေပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်နေတဲ့ အောက်ဆီဂျင်ကျ သေဆုံးရမူအတွက်၊ အမြဲ အောက်ဆီဂျင်နဲ့ အခြားလိုတာတွေ အမြဲတိုင်းတာစစ်ဆေးစောင့်ကြည့်နေဖို့ပါ။ တချို့ မှာလဲ အောက်ဆီဂျင်ကျတော့မယ့် လက္ခဏာတွေ ပြလာတတ်တာကို သတိထားမိဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါတွေက အိပ်နေချိန်မှာ သွေးခုန်နှုန်းနဲ့ နှလုံးခုန်းနှုန်းစတက်လာတာ (တစ်မိနစ်ကို ၁၀၀ ကျော်အထိ)၊ အိပ်နေရာကထပြီး အိမ်သာသွားချိန်၊ ရေသွားချိုးချိန်၊ ထမင်းထိုင်စားချိန်နဲ့ လမ်းလျှောက်ချိန်တွေမှာ မောကာ၊ အောက်ဆီဂျင်စကျလာတာတွေပါ။
သွေးတွင်း အောက်ဆီဂျင် (၉၂)% အောက် စကျလာပါက၊ ပုံမှန်လူတွေအတွက် အောက်ဆီဂျင် စတင်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ အသက်ကြီးသူတွေအတွက်တော့ (၉၄)% လောက် စကျလာချိန်မှာ စတင်ပေးနိုင်လျှင် ပိုကောင်းပါတယ်။ အောက်ဆီဂျင် မရနိုင်ချိန်မှာ၊ မှောက်အိပ်နည်း၊ ထိုင်နေနည်းတွေနဲ့ အစားထိုး ကြိုးစားနိုင်ပေမယ့် အောက်ဆီဂျင် ရနိုင်လျှင်တော့ အကောင်းဆုံးထိရောက်စွာ ကုသနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အောက်ဆီဂျင်အိုး အရွယ်မျိုးစုံရှိနေချိန်မှာ၊ တချို့ လဲ (၁၅) လီတာစာသာ တစ်ညတာလိုအပ်သူတွေအတွက် ဆရာဝန်တွေ ကြိုးစားရုန်းကန်ရင်း ထိရောက်အောင် ကုပေးနေရာကြပါတယ်။ တချို့ အတွက်တော့ နာရီဝက်၊ တစ်နာရီပေးပြီး အောက်ဆီဂျင် တက်မတက်စောင့်ကြည့်ကာ၊ ဆက်တိုက်မပေးဘဲ၊ မနက်ထိခံအာင်ထိန်းပေးကာ၊ နောက်အောက်ဆီဂျင် ထပ်ရှာပြီး၊ အသက်ဆက်နိုင်ခဲ့တာတွေ ရှိလာနေပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အောက်ဆီဂျင် (၉၂) အောက် ရောက်လာသူတွေအတွက်၊ အမေရိကန်မှာ ဆေးရုံတွေမှာ ကုသသလို၊ လူအိုရုံ (Nursing Home) တွေကို ကူညီညွှန်ကြားပေးပြီး၊ အရောင်ကျဆေး Steroid (Dexamethasone) ပေးနိုင်ကာ၊ ထိရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း အလားတူ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်နဲ့သာ၊ ဒီထိရောက်ပေမဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကြီးနိုင်တဲ့ဆေးကို သုံးသင့်ပါတယ်။ Dexamethasone ကို လူနာတွေ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဝယ်ယူသုံးစွဲတာ လုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူး။ အကြောင်းက ရောဂါအခံရှိထားသူတွေမှာ ဒီဆေးကြောင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနဲ့ အသက်အန္တရာယ် ဖြစ်တတ်နေလို့ပါ။ အထူးသဖြင့် ဆီးချိုရှိသူတွေမှာ Dexamethasone ဆေးပေးလျှင်၊ သကြားဓာတ် မြင့်တက်လွန်းတာနဲ့ သွေးဖြူဥ (White Blood Cell) ပါ လိုက်တက်လာပြီး၊ ဘက်တီးရီးယား ပိုးဝင်သလို အထင်မှားကာ၊ မလိုအပ်ဘဲ ပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေး သွားသုံးမိကာ နောက်ဆက်တွဲတွေ ဆိုးလာမှာပါ စိုးရိမ်ရပါတယ်။ ဆရာဝန်နဲ့ချိတ်ထားလျှင်တော့၊ လူနာမှာ သကြားဓာတ် တက်လွန်းလာတာကို ပြန်ချဖို့ အပါအဝင်၊ နောက်ဆက်တွဲတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ဆေးတွေ ထိန်းပေးနိုင်ပါတယ်။
အခုလို မလိုအပ်တဲ့ဆေးတွေ မသောက်မိဖို့က အထူးအရေးကြီးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး Diclofenac ၊ Ibuprofen စတာတွေကို လုံးဝမသုံးမိဖို့ပါ။ ဒီဆေးတွေက အဖျားလည်းကျစေတာမို့၊ ကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အစပိုင်းကာလမှာ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာ သုံးခဲ့ရာကနေ သေဆုံးမူများခဲ့တာကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမေရိကန်နဲ့ ဗြိတိန်မှာ ဒီ ဆေးတွေအစား၊ အဖျားအတွက် ပါရာစီတမော (Paracetamol) ကိုသာ သုံးပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို၊ မလိုအပ်ဘဲ ပဋိဇီဝဆေး (Antibiotics) ကိုလည်း မသုံးဖို့ပါ။ အကြောင်းက ပဋှိဇီဝပိုးသတ်ဆေးကြောင့် ဝမ်းလျောတာ ဖြစ်စေနိုင်ပြီး၊ ကိုဗစ်ကြောင့် ဝမ်းလျှောတာနဲ့ ခွဲရခက်သွားနိုင်လို့ပါ။ ကိုဗစ်ကြောင့်ဝမ်းလျှောသူမှာ ကိုဗစ်ပိုဆိုးလာနိုင်တာ (ကျောက်ကပ်ပျက်နိုင်တာ၊ အသဲထိခိုက်နိုင်တာ) တွေရှိနိုင်တာမို့၊ ကြိုတင်ခွဲခြားသိပြီး ပိုဂရုစိုက် စောင့်ကြည့်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုဗစ်ကြောင့် အနံ့ပဲ ပျောက်သူတွေကတော့၊ ဘာမှသိပ်အများကြီး မထိခိုက်ဘဲ ပြန်ကောင်းလာလေ့ ရှိတတ်ပါတယ်။
အမရိကန်နဲ့ ဗြိတိန်က ညွှန်ကြားချက် (Guideline) အတိုင်း၊ အရင် အမေရိကန်က လူအိုရုံတွေအတွက် အသက်ကယ်ပေးခဲ့သလို၊ အခု မြန်မာနိုင်ငံက လူနာတချို့ ကို ကယ်ဆယ်ပေးနေတဲ့၊ နယူးယောက်မြို. Wyckoff Heights ဆေးရုံက၊ ကူးစက်ရောဂါအထူးကု ဒေါက်တာဇေယျာသက် (https://www.facebook.com/zeyar.thet.1) ကို ကိုဝင်းမင်းက ဆက်သွယ်မေးမြန်း တင်ပြထားပါတယ်။
မွနျမာနိုငျငံမှာ ကိုဗဈ-19 ဖွဈကွတဲ့ လူနာတှမှော ဆေးရုံတှကေ လကျမခံနိုငျလောကျအောငျ မြားလာနခြေိနျမှာ၊ ကိုယျ့အိမျမှာပဲ စောငျ့စားကုသကွရာ သဆေုံးမူတှလေညျး အတျောမြားလာနပေါတယျ။ သဆေုံးမူတှေ လြှော့ခနြိုငျရေးအတှကျ ပွညျတှငျးပွညျပ ကနျြးမာရေးပညာရှငျတှကေ ဖုနျးကတဆငျ့ ကူညီကုသပေးနရောမှာ အဓိကတော့ လူနာတှကေ ကိုယျ့ဟာကိုယျ ဆေးမီးတိုနဲ့ ကွိတျမကုဘဲ၊ ဆရာဝနျတှနေဲ့ မေးမွနျး စဈဆေး အကွံယူကုသဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ ဒီရောဂါဖွဈလာတာကို မရှကျမကွောကျဘဲ လကျခံပွီး၊ ဆရာဝနျတှကေို ဆကျသှယျမေးမွနျးဖို့ လိုပါတယျ။ တခြို့တှကေ သာမနျ အပူရှပျ၊ တုပျကှေး၊ အအေးမိတာလို့ စိတျဖွကောကှယျပွောဆိုနကွေသလို၊ တခြို့တှကေလဲ သမှောပဲလို့ စိုးရိမျလှနျကဲနတောတှေ ရှိနပေါတယျ။ ဆရာဝနျတှနေဲ့ ကွိုတငျခြိတျဆကျထားခွငျးဖွငျ့ အခွအေနေ မဆိုးလာခငျမှာ၊ စောစောသိ စောစောကုသနိုငျပါတယျ။ နောကျကမြှသိပွီး အောကျဆီဂငျြ အလှနျအမငျးကနြခြေိနျမှ သိရလြှငျတော့၊ ပွနျကောငျးအောငျကုစားဖို့ ခကျခဲလှနျးလှပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံထဲက ဆရာဝနျတှကေို ဆကျသှယျရခကျနလြှေငျလဲ၊ နိုငျငံခွားက မွနျမာဆရာဝနျတှကေို လူမူမီဒီယာကှနျရကျ (Social Media – Facebook Messenger) က တဆငျ့ ဆကျသှယျနိုငျပါတယျ။
အမရေိကနျနဲ့ ဗွိတိနျက ကိုဗဈကုသရေးညှနျကွားခကျြ (Guideline) အပျေါအခွခေံပွီး၊ အရငျ အမရေိကနျက လူအိုရုံတှနေဲ့၊ မွနျမာနိုငျငံကလာတဲ့ လူနာတှကေို၊ အမရေိကနျရောကျ မွနျမာဆရာဝနျတှေ တယျလီဖုနျးကတဆငျ့ အမြားကွီး အသကျကယျပေးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ အခုလဲ မွနျမာနိုငျငံမှာ သဆေုံးမူမြားလာနတောအတှကျ၊ ဒီနညျးနဲ့ပဲ ဆကျကယျတငျပေးနိုငျတာတှရှေိလာနပေါပွီ။ မွနျမာနိုငျငံမှာတော့ အရေးကွီးဆုံးဖွဈနတေဲ့ အောကျဆီဂငျြကြ သဆေုံးရမူအတှကျ၊ အမွဲ အောကျဆီဂငျြနဲ့ အခွားလိုတာတှေ အမွဲတိုငျးတာစဈဆေးစောငျ့ကွညျ့နဖေို့ပါ။ တခြို့မှာလဲ အောကျဆီဂငျြကတြော့မယျ့ လက်ခဏာတှေ ပွလာတတျတာကို သတိထားမိဖို့ လိုပါတယျ။ ဒါတှကေ အိပျနခြေိနျမှာ သှေးခုနျနှုနျးနဲ့ နှလုံးခုနျးနှုနျးစတကျလာတာ (တဈမိနဈကို ၁၀၀ ကြျောအထိ)၊ အိပျနရောကထပွီး အိမျသာသှားခြိနျ၊ ရသှေားခြိုးခြိနျ၊ ထမငျးထိုငျစားခြိနျနဲ့ လမျးလြှောကျခြိနျတှမှော မောကာ၊ အောကျဆီဂငျြစကလြာတာတှပေါ။
သှေးတှငျး အောကျဆီဂငျြ (၉၂)% အောကျ စကလြာပါက၊ ပုံမှနျလူတှအေတှကျ အောကျဆီဂငျြ စတငျပေးဖို့ လိုပါတယျ။ အသကျကွီးသူတှအေတှကျတော့ (၉၄)% လောကျ စကလြာခြိနျမှာ စတငျပေးနိုငျလြှငျ ပိုကောငျးပါတယျ။ အောကျဆီဂငျြ မရနိုငျခြိနျမှာ၊ မှောကျအိပျနညျး၊ ထိုငျနနေညျးတှနေဲ့ အစားထိုး ကွိုးစားနိုငျပမေယျ့ အောကျဆီဂငျြ ရနိုငျလြှငျတော့ အကောငျးဆုံးထိရောကျစှာ ကုသနိုငျပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ အောကျဆီဂငျြအိုး အရှယျမြိုးစုံရှိနခြေိနျမှာ၊ တခြို့လဲ (၁၅) လီတာစာသာ တဈညတာလိုအပျသူတှအေတှကျ ဆရာဝနျတှေ ကွိုးစားရုနျးကနျရငျး ထိရောကျအောငျ ကုပေးနရောကွပါတယျ။ တခြို့အတှကျတော့ နာရီဝကျ၊ တဈနာရီပေးပွီး အောကျဆီဂငျြ တကျမတကျစောငျ့ကွညျ့ကာ၊ ဆကျတိုကျမပေးဘဲ၊ မနကျထိခံအာငျထိနျးပေးကာ၊ နောကျအောကျဆီဂငျြ ထပျရှာပွီး၊ အသကျဆကျနိုငျခဲ့တာတှေ ရှိလာနပေါတယျ။
ဒါ့အပွငျ အောကျဆီဂငျြ (၉၂) အောကျ ရောကျလာသူတှအေတှကျ၊ အမရေိကနျမှာ ဆေးရုံတှမှော ကုသသလို၊ လူအိုရုံ (Nursing Home) တှကေို ကူညီညှနျကွားပေးပွီး၊ အရောငျကဆြေး Steroid (Dexamethasone) ပေးနိုငျကာ၊ ထိရောကျခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ မွနျမာနိုငျငံမှာလညျး အလားတူ ဆရာဝနျညှနျကွားခကျြနဲ့သာ၊ ဒီထိရောကျပမေဲ့ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးကွီးနိုငျတဲ့ဆေးကို သုံးသငျ့ပါတယျ။ Dexamethasone ကို လူနာတှေ ကိုယျ့ဟာကိုယျ ဝယျယူသုံးစှဲတာ လုံးဝမလုပျသငျ့ပါဘူး။ အကွောငျးက ရောဂါအခံရှိထားသူတှမှော ဒီဆေးကွောငျ့ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးနဲ့ အသကျအန်တရာယျ ဖွဈတတျနလေို့ပါ။ အထူးသဖွငျ့ ဆီးခြိုရှိသူတှမှော Dexamethasone ဆေးပေးလြှငျ၊ သကွားဓာတျ မွငျ့တကျလှနျးတာနဲ့ သှေးဖွူဥ (White Blood Cell) ပါ လိုကျတကျလာပွီး၊ ဘကျတီးရီးယား ပိုးဝငျသလို အထငျမှားကာ၊ မလိုအပျဘဲ ပဋိဇီဝပိုးသတျဆေး သှားသုံးမိကာ နောကျဆကျတှဲတှေ ဆိုးလာမှာပါ စိုးရိမျရပါတယျ။ ဆရာဝနျနဲ့ခြိတျထားလြှငျတော့၊ လူနာမှာ သကွားဓာတျ တကျလှနျးလာတာကို ပွနျခဖြို့ အပါအဝငျ၊ နောကျဆကျတှဲတှအေတှကျ လိုအပျတဲ့ဆေးတှေ ထိနျးပေးနိုငျပါတယျ။
အခုလို မလိုအပျတဲ့ဆေးတှေ မသောကျမိဖို့က အထူးအရေးကွီးပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အကိုကျအခဲပြောကျဆေး Diclofenac ၊ Ibuprofen စတာတှကေို လုံးဝမသုံးမိဖို့ပါ။ ဒီဆေးတှကေ အဖြားလညျးကစြတောမို့၊ ကိုဗဈဖွဈတဲ့အစပိုငျးကာလမှာ ပွငျသဈနိုငျငံမှာ သုံးခဲ့ရာကနေ သဆေုံးမူမြားခဲ့တာကို တှရှေိ့ခဲ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ အမရေိကနျနဲ့ ဗွိတိနျမှာ ဒီ ဆေးတှအေစား၊ အဖြားအတှကျ ပါရာစီတမော (Paracetamol) ကိုသာ သုံးပါတယျ။ နောကျတဈခုက အပျေါမှာပွောခဲ့သလို၊ မလိုအပျဘဲ ပဋိဇီဝဆေး (Antibiotics) ကိုလညျး မသုံးဖို့ပါ။ အကွောငျးက ပဋှိဇီဝပိုးသတျဆေးကွောငျ့ ဝမျးလြောတာ ဖွဈစနေိုငျပွီး၊ ကိုဗဈကွောငျ့ ဝမျးလြောတာနဲ့ ခှဲရခကျသှားနိုငျလို့ပါ။ ကိုဗဈကွောငျ့ဝမျးလြောသူမှာ ကိုဗဈပိုဆိုးလာနိုငျတာ (ကြောကျကပျပကျြနိုငျတာ၊ အသဲထိခိုကျနိုငျတာ) တှရှေိနိုငျတာမို့၊ ကွိုတငျခှဲခွားသိပွီး ပိုဂရုစိုကျ စောငျ့ကွညျ့ဖို့ လိုပါတယျ။ ကိုဗဈကွောငျ့ အနံ့ပဲ ပြောကျသူတှကေတော့၊ ဘာမှသိပျအမြားကွီး မထိခိုကျဘဲ ပွနျကောငျးလာလေ့ ရှိတတျပါတယျ။
အမရိကနျနဲ့ ဗွိတိနျက ညှနျကွားခကျြ (Guideline) အတိုငျး၊ အရငျ အမရေိကနျက လူအိုရုံတှအေတှကျ အသကျကယျပေးခဲ့သလို၊ အခု မွနျမာနိုငျငံက လူနာတခြို့ကို ကယျဆယျပေးနတေဲ့၊ နယူးယောကျမွို. Wyckoff Heights ဆေးရုံက၊ ကူးစကျရောဂါအထူးကု ဒေါကျတာဇယြောသကျ (https://www.facebook.com/zeyar.thet.1) ကို ကိုဝငျးမငျးက ဆကျသှယျမေးမွနျး တငျပွထားပါတယျ။